September 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဒီလိုညနေမှာ သူတို့ရောက်လာရင် ဆိုင်တစ်ခုခုကိုသွားပြီး စားကြသောက်ကြပြီးမှ အိမ်ပြန်တာထုံးစံပါဘဲ
တစ်ခါတစ်လေ သူ့ရောင်းအားမကောင်းတဲ့အခါတွေမှာတော့ သူ့ရဲ့လက်ကျန်လေပူပေါင်းလေးတွေကို လေထဲကို လွှတ်တင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ လေပူးပေါင်းလေးတွေ လွင့်တက်သွားတာကိုမြင်ရင်း ကလေးတွေကသဘောကျကာ သူဆီလာဝယ်ကြတဲ့အတွက် ရောင်းအားလည်းပြန်တက်သွားလေ့ရှိတယ်။
Aye Yay·Wednesday, September 28, 2016
နုိုဘယ်ဆုရ ကမ္ဘာကျော် ရူပဗေဒ ပညာရှင် အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းက အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းတွေမှာ တယော ထိုးတဲ့ အချိန်ဟာ သူ့ ဘဝ အတွက် အပျော်ရွှင် ဆုံး အချိန်ဟု ဆိုတယ် ၊၊
ကျွန်တော်ရဲ ဘကြီးက အချိန်အတွက် ဒီလို ဆုံးမဖူးတယ် ၊ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်တာအတွင်းမှာ ဒီသုံးခုကို ရအောင် တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု အမိဖမ်းနိင်ရမယ်တဲ့ ၊ ၁ . ပညာ ၂. ပိုက်ဆံ ၃ . ကုသိုလ် တစ်ချို့ တွေက ဘာတစ်ခုမှာ မရလိုက်ဘူး ၊ တစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်ထိ ၊၊ တစ်ချို့ တွေဆို သုံးခုလုံးကို အချိန်တိုင်းလိုလို ပိုင်ဆိုင်ကြတယ် ၊၊ ဗေဒင် ဆရာက သူ့ ပညာနှင့်သူ ဟောစားကာ အခကြေးယူနေတဲ့ အခါမှာ မိမိက အသိဥာဏ်ရင့်တော့ မိန်းမဖြစ်သူ ဗေဒင်သွားတွက်တာကို မပြောရဲပါပဲ ရှိနေတဲ့ အခါမျိုးတွေ့ ဖူးကြမှာပါ ၊၊ လူတွေရဲ့ သဘောက ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်မှာကို နတ်မျက်စိ ဖြင့် အမြန် သိချင်ကြတယ် မဟုတ်လား ၊၊ အချိန် ညီမျှခြင်း ပိုက်ဆံ ပိုက်ဆံ ညီမျှခြင်း မိန်းမချောချောလှလှ ၊ အိုင်ဖုန်း ခုနှစ် အပေါင်း ၊ အချိန်ညီမျှခြင်း အိမ်ကောင်းကောင်း ၊ မော်ဒယ်သစ် ကားလေး အဲလို သူများနိင်ငံတွေက ဒီဂါထားတွေကို နေ့တိုင်းရွတ်ကြတယ် ၊၊ တကယ်လည်း ဖြစ်လာကြတယ် ၊၊
Soe Min·Friday, September 16, 2016
ကိုယ်ငယ်ငယ်က တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့အခါ ဝတ္ထုထဲက ကောင်မလေးက သေသွားတဲ့ ငှက်ကလေးကို မြေကြီးထဲမြှုတ်ပြီး အသုဘအခမ်းအနား လုပ်ပေးတယ် လို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကောင်လေးကိုလည်း သူနဲ့အတူတူ အသုဘလိုက်ပို့စေသတဲ့။ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းပါစေ လို့လည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်သေးတယ်။ အသည်းနုနု အတွေးနုနု နှလုံးသားနုနု အရွယ်တွေ မဟုတ်လား။ စာရေးဆရာကြီးရဲ့ အဖွဲ့အနွဲ့ကလည်း အင်မတန်မှ နုလှယဉ်လှတော့ ကိုယ်တို့လို စာဖတ်ပရိသတ် နုနုငယ်ငယ်ကလေးတွေမှာလည်း ကြွေလုဆတ်ဆတ် တဖြတ်ဖြတ်ခုန် ခံစားကြရပါတယ်လေ။ စာရေးတဲ့သူဆိုတော့ ဘာမဟုတ်တဲ့ ငှက်ကလေးသေတာကိုတောင် သည်လိုပဲ ဇာတ်နာအောင် ပိုပိုဟေသာလုပ်ပြီး အိုဗာတင်းတွေဖျော်ရေးတာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။ အပြင်မှာတော့ အချစ်ဝတ္ထုဖတ်တဲ့ အပျံသင်စ အူနူးမကလေးတွေပဲ အိမ်ကခွေးကလေးတွေ သေလည်းငို၊ ကြောင်ကလေးတွေသေလည်းငို၊ အိပ်မက်ထဲမှာ မရှိတဲ့ချစ်သူက ပစ်သွားတယ်ဆိုလည်းငို၊ မျက်ရည်တွေယိုကြလွန်းတယ်ဆိုတာ ဟိုးရှေးရှေး ကိုယ်တို့တွေ ကလေးဘဝမှာပဲ ရှိခဲ့လိမ့်မယ်။ ခုခေတ် ခုအခါ လူငယ်များက အဲ့သလိုမျိုး ဖတ်ကောင်းအောင် အနုအရွ အတုအပတွေနဲ့ ဇာတ်နာအောင် ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားတာတွေကို ရင်မခုန်တတ်တော့ဘူးတဲ့။
" Over Drive နဲ့ Over Speed "
Over Drive ဆိုတာ အင်ဂျင်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ ထရန်စမစ်ရှင်းအချိုးတစ်ခုကို ခေါ်တာပါ ။ Over Speed ဆိုတာကတော့သတ်မှတ်တဲ့
မိုင်နှုန်းတစ်ခုကိုပိုမောင်းမိတဲ့သင့်ကားအမြန်နှုန်းပါပဲ။ ခုနေပြည်တော်အမြန်လမ်းမှာ 100Km ကျော်ခဲ့ရင် Over Speed ပေါ့ ။
Over Drive ဆိုပြီး ခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာပါလာတဲ့ အော်တိုဂီယာကျမှစတင်ခေတ်စားလာတာပါ။ မိမိကားကိုလွန်ကဲတဲ့အမြန်နှုန်းတစ်ခုနဲ့မောင်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့လည်းသီးခြားမှတ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သွားပြဖို့လိုနေပြီလား မသိပါဘူး။ လောလောဆယ် မြင်သမျှတွေးသမျှတွေဟာ ကိုယ်သိထားတဲ့ စိတ်ဝေဒနာသည်တွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ လမ်းသွားရင်း လူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက် အနားကပ်လာရင် “သူ ငါ့ကို သတ်မလို့လား။ ငါ့ဆီက တစ်ခုခု လုမလို့လား” အရင်စတွေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကို ကိုယ်ဘယ်မှာနေပါတယ် ဘာအလုပ်လုပ်ပါတယ် ရေရေရာရာ မိတ်မဆက်ရဲဘူး။ ကိုယ့်ဆီကအချက်အလက်တွေ လူတကာသိလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိလာတယ်။ သွားရင်းလာရင်း သူ့ဟာသူ ချစ်ကြည်နူးနေတဲ့ တစ်တီတူးစုံတွဲလေးတွေ မြင်ရင်တောင် သိင်္ဂါရရသကို မခံစားရတော့ဘူး။ “ဒီကောင့်ကြည့်ရတာ ဆေးသမားလား မသိပါဘူး။ ဘယ်အချိန် ကောင်မလေးကို ထသတ်မလဲ။ ကောင်မလေးကရော တအောင့်လောက်နေရင် ဓါးနဲ့ထထိုးမှာလား။ အက်ဆစ်နဲ့ကောက်ပက်မှာလား” ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြစ်လာတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မောင်မောင်မြင့် နဲ့ နွဲ့နွဲ့စန်းကြီးရဲ့ အလွန်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ပေါ်လစီဝါဒဖြန့် ဇာတ်လမ်းတိုကလေးရှိတယ်။ “အသည်းတွေတုန်မှာပေါ့။
ဒီတစ်ပတ်တော့ သမီးနှင့်သား မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို
သတိရလို့ ဆက်ရက်ကလေးတွေအကြောင်း ပြောပြ
ပါမယ်။ ဦးဦးဟာ တတ်နိုင်သရွေ့ ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့တဲ့
အကြောင်းတွေ သားတို့ကို ပြောလေ့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်
ဒီအကြောင်းကတော့ ထောင်ထဲဖြစ်စဉ်ပါမှ ဖြစ်မှာမို့
မိမိတို့ ရဲ့ သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ဝိပဿနာ ကို ကျင့်ကြံ အားထုတ်နေကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွင်း ဉာဏ်စဉ်တွေ အတော်ပေါက်မြောက်လာကြတာ တို့ ၊ တစ်ချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်း မိမိတို့ စိတ်ချရတဲ့ အနေထားကို ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်လာကြလို့ စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးတွေမှာ တစ်ချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တရားရှုမှတ်နေတဲ့အချိန် မိမိရဲ့ ဟိုးအယင် အတိတ်ဘဝ ကို ပြန်မြင်တာတွေ ရှိကြပါတယ်။
ကလေးဆိုးတွေဟာ အလိုကြီးပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်ကာ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးပါတယ်။ သူတို့ကို အလိုလိုက်တာဟာ ထိန်းရပိုလွယ်သယောင်ထင် ရပေမဲ့ သူတို့လိုချင်တာဟူသမျှကို ရပါများရင်လည်း အထီးကျန်ဆန် သွားပြီး လောကကို သံသယများလာတတ်ပါတယ်။
ရင်ထဲ မှာ တမျိူးကြီးဗျာ
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုအတော်များများ ဖတ်ခဲ့ဘူး
ပထမတစ်ခုက သခင်အောင်ဆန်းအဖြစ်နဲ့တက္ကသိုလ်ကထွက်၊ တို့ဗမာအစည်း
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး (၁၃၅) မျိုး ဆိုတာ ဘာတွေလဲ
မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဓိက ကတော့ ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှုမ်း ၊ ဆိုပြီး ( ၈ မျိုး ) ရှိပါတယ် ။
( ကချင် )မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
(၁) ကချင် Kachin(၂) တရုမ်းTaron Taron(၃) ဒလောင် Dalaung(၄) ဂျိန်းဖော Jinghpaw(၅) ဂေါ်ရီ Guari(၆) ခခူ Hkahku(၇) ဒူးလန်း Duleng(၈) မရူ (လော်ဝေါ်) Maru (Lawgore)(9) ရ၀မ် Rawang(၁၀) လရှီ (လချိတ်) Lashi (La Chit)(၁၁) အဇီး Atsi(၁၂) လီဆူး Lisu
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အင်မတန်ရက်စက်တဲ့ ဓါးပြကြီးတစ်ယောက်က ရွာလေးတရွာကို ဓါးပြ၀င်တိုက်သတဲ့ ၊ ဓါးပြဆိုမှတော့ ဘယ်မေတ္တာတရားရှိမလဲကွယ် ရွာထဲရှိတာ အကုန်သိမ်းကြုံးယူသွားတာပေါ့ ၊ မကြည်ဖြူလို့ မပေးချင်တဲ့သူဆိုရင် သူက ဓါးနဲ့ ပိုင်းပစ်တော့ သူယူသမျှပေးလိုက်ကြရတာပေါ့ ၊ ဒီလိုနဲ့ ရွာကနေ ဓါးပြကြီး ထွက်သွားတော့ သတ္တိရှိပြီး ဇွဲကောင်းတဲ့ အမေအိုကြီးတစ်ယောက်က လူငယ်တွေကို ခေါ်ပြီးပြောသတဲ့ ၊ ကဲလူလေးတို့ရေ ဒီဓါးပြကြီး ဒီလောက်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးသယ်ပြီး တယ်ဝေးဝေးတော့သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး သူပင်ပန်းတဲ့အခါ ချခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းလေးများ ဒို့ ပြန်ရအောင် လိုက်ကြရအောင် ခေါ်သတဲ့ ၊
၂။ ထူးဆန်းတဲ့ လုပ်ငန်းသစ်တွေအတွက် ငွေမြှုပ်တာဟာ ဘယ်တော့မှပြန်မဆပ်မယ့်လူကို ငွေချေးလိုက်တာနဲ့ တူတူပဲ။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကစွန့်ဦးတီထွင်သူမဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးဆောင်ရှေ့ရွက်မလုပ်နိုင်ရင် သေချာတဲ့ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းတစ်မျိုးမျိုးမှာပဲ ငွေထည့်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့စိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ ငွေမထည့်ပါနဲ့။
မြန်မာတို့ ရဲ့နှစ်ပေါင်း သန်း ၄၀ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ
၁၈၅၉ ခုနှစ် မှာ ချား(စ်)ဒါဝင် က မျိုးစိတ်တို့ ရဲ့ မူလအစ (The origin of Spieces ) ဆိုတဲ့ စာအုတ်ထုတ်ဝေလိုက်တော့ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံး ပွတ်လော ရိုက်သွားတော့ တယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီစာအုတ်ထဲမှာ .. လူဟာ အဆင့် နိမ့် တဲ့ ကျောရိုး ရှိ သတ္တ၀ါ တစ်မျိုးကနေ သဘ၀ရွှေးချယ်မှု အရ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာသူဖြစ်တယ်လို့ ဒါဝင် ကရဲရဲ ကြီးကို ဆိုလိုက်တဲ့ အခါမှာ ရှေးရိုး သမားတွေ ဆတ်ဆတ် ခါသွားတော့တာပဲ ။
လွမ်းချင်းလည်း ငါ မဆို
အဲချင်းလည်း ငါ မသီ
"မျှော်ချင်း "သက်သက် ကဗျာသစ်
ရင်ထဲက ကို ဖြစ်တည်လာ
ဆွေ မြန်မာတို့ထံ စာသဝဏ်။
ငအတစ်ယောက်ကို ငလိမ်တစ်ယောက်တွေ့တော့ ငလိမ်ကပြောတယ်..
“ငါ့မှာသာ ချိုချဉ်တစ်လုံးရှိရင် နင့်ကိုတကယ်ပေးမှာ”တဲ့။
ငအ တစ်ချက်စဉ်းစားပြီး အိတ်ကပ်ထဲကချိုချဉ်တစ်လုံးကို ငလိမ်လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။